Moz Pro: Kugadzira Zvizhinji MuSEO | Martech Zone
Tsvaga Injini Kugonesa (SEO) inzvimbo yakaoma uye inogara ichichinja. Zvinhu zvakaita sekushandurwa kweGoogle algorithms, maitiro matsva, uye, nguva pfupi yadarika, kukanganisa kwehutachiona munzira iyo vanhu vanotsvaga zvigadzirwa nemasevhisi zvinoita kuti kurovera pasi zano reSEO rimwe kuome. Mabhizinesi aifanira kuwedzera yavo yewebhu kuvapo zvakanyanya kusimuka kubva pamakwikwi uye nzvimbo yakazara nemvura idambudziko kune vatengesi.
Iine akawanda SaaS mhinduro kunze uko, zvakaoma kutora uye kusarudza kuti ndeapi akakosha uye ndeapi ari kupisa gomba muhomwe yako yekutengesa. Kugara uchiita zvakanakisa pasisitimu yako yekushambadzira online - uye bhajeti yayo - zvakakosha kuti urambe uchifamba. Uine ma metric akawanda uye zvinhu zvakasiyana zvekufunga nezvazvo kana uchishambadzira online, unogona kurasika mune iyo data uye kuwanda kwesoftware yekuparidza yakatarwa mhinduro.
Moz Pro yakavakwa neakawanda mashandiro, nyore kushandisa, uye data dhata mupfungwa kubatsira vashambadzi kupepeta kuburikidza neyakaomarara SEO data uye software kuti uwane zvimwe kunze kwewebhu zvinyorwa, mawebhusaiti, uye bhajeti.
Kuwana Nyore kweDhijitari Dhata
Backlinks ndiwo akasarudzika maseru esimba rako resaiti. Vanoratidza kukosha uye kudyidzana uye vanogona kubatsira webhusaiti yako kukwirisa kumusoro paSERPs. A kudzidza kwakaitwa nePerficient munguva pfupi yapfuura akagumisa kuti Moz yakanga iine hombe data dhata, 90% kupfuura yechipiri pakukura. Maturusi aunoshandisa anogona kukanganisa zvakanyanya kubudirira kwako muSEO, uye nekuwedzera data iwe raunokwanisa kuita.
Izvo zvinonyanya kuzivikanwa zvinongedzo zviripo zviri kunongedzera kumashure kune yako saiti, zviri nyore zviri kuti vatengi vaziwane. Moz Pro zvinobudirira inotara ese backlinks ese saiti kune peji rako uye inoratidza ekuchengetedza kana kukanda kunze se spammy.
Iyo zvakare inosiyanisa iyo madomaine neako maratidziro, ichikuratidza iwe mamwe maratidziro kubva kune mamwe madomaini pane kudzokororwa zvinongedzo kubva kune imwe. Iyi ndiyo metric ine simba kune SEO nyanzvi sezvo ichipa yakanyanya kumiririra yako yewebhu kuvepo. Uyezve, metroli dzekupihwa dzeMoz Domain Authority uye Peji Chiremera dzinobatsira kuyera kusimba kwechero webhusaiti kana peji uye mukana wekubuditsa vamwe muSERPs.
MaMoz Pro maficha akasiyana uye akapamhama. Iyo interface, zvisinei, inogonesa ayo mazhinji mabasa kuburikidza neyakareruka, yakagadziriswa dhizaini.
Mabhatani maviri ndee zvese zvaunoda kuti uwane chero yakanangana neSEO-inoenderana nedhata poindi iwe yaungangoda. Pane-peji zvinhu, mamiriro eiyo HTTP kodhi, metric yekubatanidza, schema markup, kunetsekana kwemazwi akakosha… zvinongobaya kaviri chete!
Logan Ray, Dhijitari Kushambadzira Nyanzvi pa Bhakoni
Iyo inowanikwa tabo dhizaini inoitirwa kubatsira yega yega SEO uye nyanzvi yekushambadzira, zvisinei neruzivo. Zvishandiso senge Keyword Explorer inoshanda ruoko-mu-ruoko ne-pa-peji optimization, kuratidza maitiro ako mapeji pakati pevanokwikwidza uye kwaunogona kusimudzira yako SERP masosi.
Iwe unogona kuwana kuongorora kwewebsite, keyword optimization, masosi, backlink kuongorora uye nezvimwe, zvese munzvimbo imwechete. Kuva nechikumbiro chimwe chete kumatambudziko akawanda kunozvibhadharira. Panzvimbo pekushandisa - nekudaro uchitenga - akawanda maficha ekuita akasiyana discrete, iwe unogona kuchengetedza nguva nemari ine yakazara yakasanganiswa, imwechete mhinduro.
Kupa Kufambira Mberi Kwechikwata Chako
Akawandisa manhamba uye magirafu anogona kubatsira kune veterans veSEO, asi rakawandisa data rinotyisa kune vakawanda. Mazwi akakosha, Domain Authority, kukamba saiti, uye zvimwe - kuratidza SEO kukunda kana kurasikirwa kune yako kambani kunonetsa, kunyangwe kana nyanzvi dzisiri dzeSEO dzichinzwisisa terminology. Moz Pro inoshanda kushambadza data rakaomarara uye kuita kuti zvive nyore kunzwisisa mashandisiro anoita mawebhusaiti ako nemawebhusaiti kupikisana nemakwikwi.
Sezvo rako basa semushambadzi rinosanganisira kuburitsa zvaunowana, kutsvagisa, uye kukunda, Moz Pro inosanganisira yayo yakasarudzika software software.
Iyo yakasarudzika mishumo ficha inotipa iyo dhata yatinoda kuratidza mapurojekiti edu nemaitiro… uye zvinounza kujeka kuri pachena kune yedu indasitiri.
Jason Nurmi, maneja wekushambadzira pa Zillow
Uine kujekeserwa kwakakwidziridzwa, machati ari nyore kugaya, uye zvimwe zvinoonekwa, Moz Pro yetsika mushumo basa rinogona kubatsira kutaurirana zvinangwa zvako uye zvaunoda zvinobudirira.
Moz yanga iri pamberi peSEO mune ese enjini dzekutsvaga 'shanduko dzakawanda. Veterans nevatsva zvakafanana vanowana avo avanofarira mabasa kuburikidza neMoz Pro mapakeji akasiyana uye maficha pavanenge vachichengetera-ku-kudhara pane nyowani SEO maitiro uye shanduko.
Tanga Yako Yemahara Moz Pro Trial
Tags: Backlinksdomain domainmazwi akadzamamoz prokukwanaSearch Engine Optimizationseoseo chikuva